Kandıra Devlet Hastanesi Yoluna Neşter | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 Kocaeliကန်ဒီယာပြည်နယ်ဆေးရုံသို့သွားသောလမ်းတွင် Scalpel
19 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
kandira ပြည်နယ်ဆေးရုံလမ်း nester
Kandira ခရိုင် Orhan ခရိုင်တွင်တည်ရှိသောပြည်နယ်ဆေးရုံကိုမြို့လယ်ရှိအဓိကလမ်းမကြီးမှKabaağaçsလမ်းမှတစ်ဆင့်သွားနိုင်သည်။ Kabaağaçလမ်း၏အခက်အခဲကြောင့်လူနာများကို Kandira ပြည်နယ်ဆေးရုံသို့လူနာတင်ယာဉ်ဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ Kandira ပြည်နယ်ဆေးရုံ၏တောင်းဆိုမှုအရ Kocaeli Metropolitan Municipality သည်အဝေးပြေးလမ်းနှင့်ပြည်နယ်ဆေးရုံကြားရှိ 800 မီတာအပိုင်းအကြားကတ္တရာခင်းထားသည်။ ကတ္တရာအလုပ်သည်လမ်းကိုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေခဲ့သည်။
ကွန်ကရစ်လမ်းပေါ်တွင် 800 တုန်လှုပ်ခြင်း
မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးသည်မြို့သူမြို့သားများကိုမြို့အနှံ့အပြားတွင်လိုအပ်သောပိုမိုသက်သောင့်သက်သာရှိပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောလမ်းများကိုပေးနေသည်။ ဤအခြေအနေတွင်သိပ္ပံဌာနမှအဖွဲ့များ၊ လူနာတင်ယာဉ်နှင့် Kandira ပြည်နယ်ဆေးရုံသို့လူနာများပိုမိုလွယ်ကူစွာသယ်ဆောင်နိုင်သည့်ယာဉ်များသည်ကတ္တфလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုအတိုင်းအတာအရ၊ 800 တန်ချိန်များစွာရှိသည့်ကတ္တရာနှင့်Kabaağaçလမ်းကြားရှိပြည်နယ်ဆေးရုံတွင်ကတ္တရာစေးကိုထည့်ထားသည်။
Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာသည်မြို့လယ်ခေါင်နှင့်ကျေးရွာများရှိလမ်းများကိုပြုပြင်၊ ပြုပြင်၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်အတူလမ်းများပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသည်။ ပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုများမှတစ်ဆင့်နိုင်ငံသားများကိုပိုမိုသက်သောင့်သက်သာရှိသောခရီးသွားလာခြင်းနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေပါသည်။
ရှေ့မြေပေါ်လူကူးတံတားအတွက် Tokat ပြည်နယ်ဆေးရုံ 23 / 06 / 2010 Tokat State Hospital ဆေးရုံရှေ့တွင်ဖြတ်သန်းသွားသောလမ်းတွင်လူသွားလူကူးလမ်းကြောင်းသစ်ကိုတင်ခဲ့သည်။ Tokat ရှိ 2010 သည်2ဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးŞerifYılmazEndüstri၏ဥက္ကဌအနေဖြင့်ပြည်နယ်ညှိနှိုင်းရေးဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေး
အဆိုပါရထား Nevsehir ပြည်နယ်ဆေးရုံလူနာတင်ယာဉ်ကိုကူးခဲ့ 01 / 02 / 2018 Nevşehir Devlet Hastanesine ait Ambulans, Niğde ye hasta götürürken hemzemin geçitte tren çarptı. Niğde’de hemzemin geçit bariyerlerinin kısa olması faciaya davetiye çıkarıyor. Aradaki boşluktan geçmeye çalışan bazı sürücüler ölümle burun…
အခုတော့ Seka ပြည်နယ်ဆေးရုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလွန် Comfortable 12 / 02 / 2019 Izmit Seka ပြည်နယ်ဆေးရုံ၊ Yenidogan ကျောင်းပရဝုဏ်နှင့် Walkway ခရိုင်ဆေးခန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်နယ်၏အရေးကြီးဆုံးကျန်းမာရေးစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Kocaeli Metropolitan Municipality Akçarayသည် Seka State Hospital Yenidoğan Campus တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
ယာဉ်၏Çaycumaပြည်နယ်ဆေးရုံကြိုးဆွဲရထားနေ့က 27 14 419 ပြည်သူ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ 18 / 04 / 2019 Naycuma မြူနီစီပယ်ပြည်နယ်ဆေးရုံသည် 14 ထောင်ပေါင်းများစွာသော 419 လူများပေါ်ပေါက်သည့် နေ့မှစ၍ စီးတီးဓာတ်လှေကား (Funicular) ဆောက်လုပ်ရေးကိုလမ်းလျှောက်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးလိမ့်မည်။ Abdullah Kalaycıသည် caycuma မြူနီစီပယ်ပြည်နယ်ဆေးရုံသို့…
Alfafa ဟာ scalpel na ဟောင်းများ Gemlik လမ်းမကြီး '' 28 / 10 / 2014 Gemlik လမ်းဟောင်း၏ Clover ခေါင်းစဉ်: Bursa Metropolitan မြို့တော်ဝန် Recep Altepe, Demirtas, သူတို့လုပ်နေသော dumpster clover လမ်းဆုံရှိရာ 12 သန်းပေါင်သည်စီမံကိန်းအတွက်ကုန်ကျမည်ဟု4လအပြီးသတ်မည်ဟုသူကပြောသည်။
ရှေ့မြေပေါ်လူကူးတံတားအတွက် Tokat ပြည်နယ်ဆေးရုံ
အဆိုပါရထား Nevsehir ပြည်နယ်ဆေးရုံလူနာတင်ယာဉ်ကိုကူးခဲ့
ယာဉ်၏Çaycumaပြည်နယ်ဆေးရုံကြိုးဆွဲရထားနေ့က 27 14 419 ပြည်သူ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့
Alfafa ဟာ scalpel na ဟောင်းများ Gemlik လမ်းမကြီး ''
Alsancak ဘူတာ scalpel များ၏ရှေ့မှောက်၌အသွားအလာ
ဒုတိယ scalpel အစ္စတန်ဘူလ် Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရဲ့အသွားအလာပြဿနာများ
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Aktas, လမ်းပြမြေပုံကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ် ... အကြီးမားဆုံး scalpel သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး